Bit By Bit - Ịmepụta mmekọrịta ọnụ - Ihe ị gụrụ na-esote
Okwu Mmalite (nkebi nke 5.1)
Mmekọrịta Mass na-ejikọta echiche sitere na sayensị nke ụmụ amaala , ịzụ ahịa , na ọgụgụ isi . Nkà mmụta sayensị nke ụmụ amaala pụtara na ọ bụ "ụmụ amaala" (ya bụ, ndị nonscientists) na usoro sayensị; maka ndị ọzọ, lee Crain, Cooper, and Dickinson (2014) na Bonney et al. (2014) . Ịgba ụzụ na-apụtakarị na a na-edozi nsogbu n'otu ụlọ ọrụ ma na-agbachitere ìgwè mmadụ; maka ndị ọzọ, lee Howe (2009) . Nchịkọta mkpokọta na-egosipụtakarị ìgwè dị iche iche nke ndị na-emekọ ọnụ n'ụzọ ndị yiri ka ha nwere ọgụgụ isi; maka ndị ọzọ, lee Malone and Bernstein (2015) . Nielsen (2012) bụ akwukwo-ogologo nkwalite na ike nke mmekọrịta ọnụ maka nchọpụta sayensị.
E nwere ọtụtụ ụdị mmemme nke na-adabaghị na atọ nke m nyere, echekwara m na atọ n'ime ndị a kwesiri nlebara anya pụrụ iche n'ihi na ha nwere ike ịba uru na nchọpụta mmadụ. Otu ihe atụ bụ ahịa ndị amụma, ebe ndị na-azụ ahịa na-azụ ma na-erekwa nkwekọrịta bụ ndị a ga-akwụghachi ụgwọ na-adabere na nsonaazụ ndị na-eme n'ụwa. A na-ejikarị ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na ndị gọọmenti eme ihe na-ekwu maka amụma, ndị na-eme nchọpụta mmekọrịta ọha na eze na-ejikwa ha na-ebu amụma banyere mbipụta e bipụtara na nkà mmụta uche (Dreber et al. 2015) . Maka nchịkọta nke ahịa ndị amụma, lee Wolfers and Zitzewitz (2004) na Arrow et al. (2008) .
Ihe atụ nke abụọ nke na-adabaghị na atụmatụ m nwere bụ usoro PolyMath, ebe ndị na-eme nchọpụta kwadoro iji blọọgụ na wikis gosipụta akụrụngwa ọhụrụ mgbakọ na mwepụ. Mmemme PolyMath dị n'ụdị ụfọdụ dị ka Netflix Prize, ma na oru a, ndị ọzọ na-arụ ọrụ nke ọma na ndị ọzọ. Maka ihe gbasara oru PolyMath, lee Gowers and Nielsen (2009) , Cranshaw and Kittur (2011) , Nielsen (2012) , na Kloumann et al. (2016) .
Ihe atụ nke atọ nke na-adabaghị n'ime atụmatụ m nwere bụ nke na-adabere na nchịkọta oge dịka Mgbasa Ozi Nchọpụta Advanced Defense Research Projects Agency (DARPA) (ntụgharị, Nsogbu Red Balloon). Maka ndị ọzọ na oge ndị a na-eleba anya na-ele Pickard et al. (2011) , Tang et al. (2011) , na Rutherford et al. (2013) .
Nchịkọta mmadụ (ngalaba 5.2)
Okwu ahụ bụ "nchịkọta mmadụ" sitere na ọrụ ndị ọkà mmụta sayensị na-arụ, na ịghọta ihe dị n'azụ nchọpụta a ga-eme ka ike gị nwee ike ịchọta nsogbu ndị nwere ike ịkwado ya. Maka ọrụ ụfọdụ, kọmputa dị ike, na ike karịrị nnọọ nke ndị mmadụ maara. Dịka ọmụmaatụ, na chess, kọmputa nwere ike ịkụ ọbụna ọbụna ndị na-eto eto kachasị mma. Ma-na nke a na-emeghị ka ndị ọkà mmụta sayensị mara ya nke ọma - maka ọrụ ndị ọzọ, kọmputa dị nnọọ njọ karịa ndị mmadụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ugbu a ị ka mma karịa kọmputa kachasị mma na ọrụ ụfọdụ gụnyere nhazi nke ihe oyiyi, vidiyo, ọdịyo, na ederede. Ndị ọkà mmụta sayensị na-arụ ọrụ na arụmọrụ ndị a siri ike-ọrụ ndị dị mfe maka mmadụ mere ka ha ghọta na ha nwere ike ịgụnye ụmụ mmadụ n'usoro usoro ha. Nke a bụ otú Luis von Ahn (2005) kọwaa mmadụ mgbe ọ na-ebu ụzọ dee okwu ahụ na nzaghachi ya: "usoro ihe eji eme ka ikike mmadụ rụọ ọrụ iji dozie nsogbu ndị kọmputa na-enweghị ike idozi." echiche zuru oke nke okwu a, lee Law and Ahn (2011) .
Dị ka nkọwa akọwapụtara na Ahn (2005) Foldit-nke m kọwara na ngalaba na oku na-emeghe-nwere ike iwere dị ka ọrụ nyocha mmadụ. Otú ọ dị, m na-ahọrọ ịkọkọta nchekwa dịka oku a na-akpọghe n'ihi na ọ chọrọ nkà mmụta pụrụ iche (ọ bụ ezie na ọ bụghị ọzụzụ nkịtị) ọ na-ewekwa ngwọta kachasị mma, kama iji usoro ịmekọrịta nkewa.
Okwu Wickham (2011) na-eji "nkedo di iche-iche" mee ihe iji kọwaputa usoro maka ntughari onodu onu ogugu, mana o na-achota usoro nke otutu oru atumatu mmadu. Usoro nkwekọrịta-iche-iche yiri nke MapReduce kpuchie na Google; maka ndị ọzọ na MapReduce, lee Dean and Ghemawat (2004) na Dean and Ghemawat (2008) . Maka ndị ọzọ gbasara ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ekesa, lee Vo and Silvia (2016) . Isi nke 3 nke Law and Ahn (2011) nwere mkparịta ụka nke oru ngo na ngwakọta nke mgbagwoju anya karịa ndị nọ n'isi nke a.
N'ime ọrụ nyocha nke mmadụ nke m tụlere n'isiokwu ahụ, ndị na-eso ya maara ihe na-eme. Otú ọ dị, ụfọdụ ọrụ ndị ọzọ, na-achọ inweta "ọrụ" nke na-eme ugbu a (yiri eBird) na enweghị mmata. Dị ka ihe atụ, lee, ESP Game (Ahn and Dabbish 2004) na reCAPTCHA (Ahn et al. 2008) . Otú ọ dị, ọrụ abụọ ndị a na-ebulitekwa ajụjụ dị mkpa n'ihi na ndị na-eso ụzọ amaghị otú e si eji data ha eme ihe (Zittrain 2008; Lung 2012) .
N'ịbụ ndị sitere na ESP Game, ọtụtụ ndị nchọpụta agbalịwo ịzụlite "egwuregwu na nzube" (Ahn and Dabbish 2008) (ya bụ, "egwuregwu ndị na-adabere na mmadụ" (Pe-Than, Goh, and Lee 2015) ) nke nwere ike ịbụ eji dozie ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ. Ihe "egwuregwu ndị a nwere nzube" nwere bụ na ha na-anwa ime ka ọrụ ndị dị na nchịkọta mmadụ dị ụtọ. Ya mere, ka ESP Game na-ekere òkè dị iche iche na-ejikọta ọnụ na Zoo Zoo, ọ dị iche na otu ndị na-akpali akpali-ọchị na ọchịchọ iji nyere aka na sayensị. Maka ịmatakwu egwuregwu na nzube, lee Ahn and Dabbish (2008) .
Nkọwa m nke Galaxy Zoo na Nielsen (2012) , Adams (2012) , Clery (2011) , na Hand (2010) , na ntinye m ihe mgbaru ọsọ nyocha nke Galaxy Zoo dị mfe. Maka ihe ndị ọzọ banyere akụkọ nchịkọta galaxy na mbara igwe na otú Galaxy Zoo si aga n'ihu na ọdịnala a, lee Masters (2012) na Marshall, Lintott, and Fletcher (2015) . Owuwu na Zoo Zoo, ndị na-eme nchọpụta mejupụtara Zoo Zoo 2, nke chịkọtara ihe karịrị ndeji nchịkọta morphological nke ndị ọrụ afọ ofufo (Masters et al. 2011) . Ọzọkwa, ha nwere nsogbu na-abụghị ụbụrụ galaxy, gụnyere ịgagharị Ọnwa, ịchọ mbara ala, na ịkọgharị akwụkwọ ochie. Ugbu a, a na-anakọta ọrụ ha niile na weebụsaịtị Zooniverse (Cox et al. 2015) . Otu n'ime ọrụ ndị a-Snapshot Serengeti-na-enye ihe àmà na a pụkwara ịmepụta ọrụ nhazi ọkwa foto Zoo-ụdị maka nchọpụta gburugburu ebe obibi (Swanson et al. 2016) .
N'ihi na ndị na-eme atụmatụ na-eme atụmatụ iji ngwaahịa microtask na-arụ ọrụ (dịka Amazon Mechanical Turk) maka ọrụ nyocha ụmụ mmadụ, Chandler, Paolacci, and Mueller (2013) na J. Wang, Ipeirotis, and Provost (2015) enye ezi ndụmọdụ banyere imebe ọrụ. nsogbu ndị ọzọ metụtara ya. Porter, Verdery, and Gaddis (2016) enye ihe atụ na ndụmọdụ na-elekwasị anya kpọmkwem maka iji nke ọrụ mgbasa ozi microtask maka ihe ha kpọrọ "data augmentation". Maka ihe ndị ọzọ na ichikota na iji akwụkwọ ederede maka mmụta nyocha maka ederede, lee Grimmer and Stewart (2013) .
Ndị nchọpụta nwere mmasị ịmepụta ihe m kpọrọ gọọmentị na-enyere aka na kọmputa (dịka, usoro ndị na-eji aha mmadu eme ihe iji zụọ igwe na-amụta ihe nlereanya) nwere ike inwe mmasị na Shamir et al. (2014) (maka ihe atụ site na iji ọdịyo) na Cheng and Bernstein (2015) . Ọzọkwa, a na-arịọ arịrịọ ndị a na-ahụ maka ọrụ mpempe akwụkwọ na oku ndị a na-emeghe, nke na-eme ka ndị nchọpụta na-agba mbọ ịmepụta ngwa ngwa ngwa igwe na-arụ ọrụ kachasị njọ. Dịka ọmụmaatụ, òtù ndị dị na Galaxy Zoo na-akpọ oku na-emeghe ma chọta ụzọ ọhụrụ nke gosipụtara ihe ahụ mepụtara na Banerji et al. (2010) ; lee Dieleman, Willett, and Dambre (2015) maka nkọwa.
Kpọọ oku (ngalaba 5.3)
Oku a na-akpọ akpọghị ọhụụ. N'ezie, otu n'ime oku a na-emeghe nke a maara nke ọma ga-abịa na 1714 mgbe nzuko omeiwu nke Britain nyere Nwee Ogologo Oge Maka onye ọ bụla nwere ike ịmepụta ụzọ iji chọpụta ogologo oge nke ụgbọ mmiri dị n'oké osimiri. Nsogbu ahụ kwụsịrị ọtụtụ n'ime ndị ọkà mmụta sayensị kachasị mma n'oge ahụ, gụnyere Isaac Newton, John Harrison, onye na-emepụta ihe na-emeri ya, mechara nweta ihe ngwọta dị iche na ndị ọkà mmụta sayensị bụ ndị lekwasịrị anya na ngwọta nke ga-agụnye na mbara igwe ; maka ama ndi ọzọ, lee Sobel (1996) . Dị ka ihe atụ a na-egosi, otu ihe mere eji emeghe oku na-arụ ọrụ nke ọma bụ na ha na-enye ndị nwere echiche na nkà dị iche iche (Boudreau and Lakhani 2013) . Lee Hong and Page (2004) na Page (2008) maka ịmatakwu uru dị iche iche dị na nzapụta nsogbu.
Onye ọ bụla nke ikpe na-akpọ oku na isi na-achọ ka a kọwakwuo nkọwa maka ihe kpatara ya ji bụrụ nke a. Nke mbụ, otu ụzọ m ga-esi mata ọdịiche dị n'etiti nyocha mmadụ na ọrụ ịkpọghe na-emeghe ma ọ bụ mmepụta bụ nkezi nke ihe ngwọta (nchịkọta mmadụ) ma ọ bụ ngwọta kachasị mma (oku a na-akpọghe). Netflix Nrite bụ ihe dị nro na nke a n'ihi na ngwọta kachasị mma mere ka ọ bụrụ ihe ngwọta nke ngwọta nke onye ọ bụla, ihe a na-akpọ ihe ngwọta (Bell, Koren, and Volinsky 2010; Feuerverger, He, and Khatri 2012) . Otú ọ dị, site na Netflix, ihe niile ha kwesịrị ime bụ ịchọta ngwọta kasị mma. Maka ndị ọzọ na Nrite Netflix, lee Bennett and Lanning (2007) , Thompson (2008) , Bell, Koren, and Volinsky (2010) , na Feuerverger, He, and Khatri (2012) .
Nke abụọ, site na nkọwa ụfọdụ nke njikwa mmadụ (dịka, Ahn (2005) ), a ghaghị ịtụle nchekwa dị ka ọrụ nhazi mmadụ. Otú ọ dị, m na-ahọrọ ịkọwa ya dị ka oku a na-akpọghe n'ihi na ọ chọrọ nkà pụrụ iche (ọ bụ ezie na ọ bụghị ọzụzụ pụrụ iche) ọ na-ewekwa ngwọta kachasị mma, kama iji usoro ịmekọrịta ọnụ. Maka ndị ọzọ na Foldit see, Cooper et al. (2010) , Khatib et al. (2011) , na Andersen et al. (2012) ; nkọwa m nke Foldit na-adọta nkọwa na Bohannon (2009) , Hand (2010) , na Nielsen (2012) .
N'ikpeazụ, onye nwere ike ịlụ ụka na Onye ọhụụ bụ ihe atụ nke nchịkọta data. M na-ahọrọ itinye ya dị ka oku a na-akpọghe n'ihi na ọ nwere usoro ịlụ ọgụ na ọ bụ naanị onyinye kachasị mma a na-eji, ebe ọ bụ na nchịkọta data na-ekesa, echiche nke ezi na onyinye ọjọọ adịghị edozi. Maka ozi ndị ọzọ na Peer-to-Patent, lee Noveck (2006) , Ledford (2007) , Noveck (2009) , na Bestor and Hamp (2010) .
N'ihe banyere iji oku emeghe na nchọpụta mmadụ, ihe yiri nke Glaeser et al. (2016) , na-akọ na isi nke 10 nke Mayer-Schönberger and Cukier (2013) nke New York City ji nwee ike ịme ihe ngosi ịkọ ọdịnihu iji mepụta nnukwu uru na arụpụta ndị nlekọta ụlọ. Na New York City, ndị ọrụ obodo a wuru ụdị ndị a, ma n'ọnọdụ ndị ọzọ, onye nwere ike iche na ha nwere ike ịmepụta ma ọ bụ mee ka ha dị mma site na oku (eg, Glaeser et al. (2016) ). Otú ọ dị, otu nchegbu bụ isi na ụdị ejiji ị na-eji etinye ego bụ na ụdị ndị a nwere ike ịme ka nkwenye ndị dị ugbu a sikwuo ike. Ọtụtụ ndị na-eme nchọpụta amaraworị "mkpofu n'ime, mkpofu," na ụdị ihe atụ ọ nwere ike ịbụ "mkparị na-enweghị isi." Lee Barocas and Selbst (2016) na O'Neil (2016) iji nwetakwuo ihe ize ndụ nke ụdị ejiji ya na ihe omumu ọzụzụ.
Otu nsogbu nke nwere ike igbochi gọọmenti na-eji asọmpi emeghe bụ na nke a chọrọ ntọhapụ data, nke nwere ike iduga mmebi nzuzo. Maka ihe gbasara nzuzo na ntinye data na oku emeghe, lee Narayanan, Huey, and Felten (2016) na mkparịta ụka na isi 6.
Maka nkọwa gbasara ọdịiche na ọdịiche dị n'etiti amụma na nkọwa, lee Breiman (2001) , Shmueli (2010) , Watts (2014) , na Kleinberg et al. (2015) . Maka ịmatakwu banyere amụma amụma gbasara nchọpụta mmadụ, lee Athey (2017) , Cederman and Weidmann (2017) , Hofman, Sharma, and Watts (2017) , ( ??? ) , Yarkoni and Westfall (2017) .
Maka nyochaa nke ọrụ oku na-emeghe na usoro ndu, gụnyere ndụmọdụ nhazi, lee Saez-Rodriguez et al. (2016) .
Ihe nchịkọta data (ngalaba 5.4)
Nkọwa m eBird na-adọta nkowa na Bhattacharjee (2005) , Robbins (2013) , na Sullivan et al. (2014) . Maka ndị ọzọ gbasara otú ndị na-eme nnyocha si eji ụdị ndekọ ọnụ ọgụgụ iji nyochaa eBird data lee Fink et al. (2010) na Hurlbert and Liang (2012) . Maka onu ogugu n'inwe atumatu nke ndi mmadu eBird, lee Kelling, Johnston, et al. (2015) . Maka ihe ndị ọzọ gbasara akụkọ sayensị nke ụmụ amaala na ornithology, lee Greenwood (2007) .
Maka ozi ndị ọzọ na Malawi Journals Project, lee Watkins and Swidler (2009) na Kaler, Watkins, and Angotti (2015) . Maka ozi ndị ọzọ na-eme na South Africa, lee Angotti and Sennott (2015) . Maka ihe omuma atu nke nyocha na iji data sitere na Malawi Journals Project see Kaler (2004) na Angotti et al. (2014) .
Ịmepụta nke gị (ngalaba 5.5)
Ọbịbịa m inye onyinye ndụmọdụ na-eme ka m nwee ike ịmalite, na-adabere na ihe atụ nke ihe ịga nke ọma na nke na-emezighị emezi nke m nụrụ. Enweela usoro nyocha nke nyocha iji tinyekwuo echiche ndị ọzọ gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya iji hazie ụlọ ọrụ dị n'ịntanetị bụ nke dị mkpa maka nhazi nke mmekọ ọrụ, hụ, dịka ọmụmaatụ, Kraut et al. (2012) .
Banyere ndị na - akpali akpali, ọ bụ nnọọ ihe dị njọ ịchọta kpọmkwem ihe mere ndị mmadụ na - ekere òkè na mmekọ ọrụ (Cooper et al. 2010; Nov, Arazy, and Anderson 2011; Tuite et al. 2011; Raddick et al. 2013; Preist, Massung, and Coyle 2014) . Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịkpali ndị nsonye na ugwo na ahia ọrụ ọrụ microtask (dịka Amazon Mechanical Turk), Kittur et al. (2013) enye ụfọdụ ndụmọdụ.
Banyere ihe ijuanya, maka ihe atụ nke nchọpụta a na-atụghị anya ya nke na-apụta site na Zooiverse projects, lee Marshall, Lintott, and Fletcher (2015) .
N'ihe banyere omume ọma, ụfọdụ okwu mmeghe dị mma maka nsogbu ndị a gụnyere Gilbert (2015) , Salehi et al. (2015) , Schmidt (2013) , Williamson (2016) , Resnik, Elliott, and Miller (2015) , na Zittrain (2008) . Maka nsogbu metụtara nsogbu gbasara iwu na ndị ọrụ Felstiner (2011) , lee Felstiner (2011) . O'Connor (2013) aza ajụjụ banyere nlekọta nke usoro nyocha nke ọma mgbe ọrụ ndị na-eme nchọpụta na ndị na-eme nchọpụta na-agbagha. Maka nsogbu metụtara ịkọ data mgbe ị na-echebe ndị na-ekere òkè na ọrụ sayensị nke ụmụ amaala, lee Bowser et al. (2014) . Abụọ Purdam (2014) na Windt and Humphreys (2016) nwere ụfọdụ mkparịta ụka banyere nsogbu okwu gbasara nkesa data. N'ikpeazụ, ihe ka ọtụtụ n'ime ọrụ kwetara na ọ bụ onyinye, ma ha enyeghị ndị na-agụ akwụkwọ ikike. Na Ngalaba, a na-edekarị ndị egwuregwu ahụ dịka onye edemede (Cooper et al. 2010; Khatib et al. 2011) . N'ebe ndị ọzọ na-emeghe oku, onye na-emeri emeri nwere ike ide akwụkwọ na-akọwa ngwọta ha (dịka, Bell, Koren, and Volinsky (2010) na Dieleman, Willett, and Dambre (2015) ).